जनभोजनलाई जनता बैंकद्धारा २ लाख सहयोग - Aarthiknews
जनभोजनलाई जनता बैंकद्धारा २ लाख सहयोग
काठमाडौं । प्रेमसागर फाउण्डेसन नेपालले संचालन गरेको जनभोजन (Food for People) लाई जनता बैंकबाट सस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत रु. २ लाख सहयोग गरेको छ ।
जनभोजन कार्यक्रमको कार्यालय तसर्पु, दामेचौर, धादिङमा एक कार्यक्रमको बिच जनता बैंकको तर्फबाट प्रेमसागर फाउण्डेसनका उपाध्यक्ष डा. प्रेमराज ढुङ्गेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रेमसागर फाउण्डेसनद्धारा संचालित जनभोजन कार्यक्रमले दैनिक ५ सय बालबालिका र करिब १ सय जना बृद्ध आमाबुबाहरुलाई दैनिक बिहानको खान खुवाउदै आएको छ ।